Broney: Manaitra Ny Vahoaka Ilay Sarintsarim-pandrobàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2011 9:34 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, македонски, 繁體中文, 简体中文, English
Ny herinandro lasa teo, niparitaka haingana be tamin'ny twitter sy facebook ny tantarana fandrobàna iray teny amin'ny faritra ara-barotra maresaka ao Gadong any Broney.
@hishamhl‎ RT @ranoadidas: twitpic.com/4t68c2 Ampahany amin'ny toerana nisy ilay asa ratsy tamin'ity atoandro ity, teo akaikin'Ayamku Gdg. Naratra tamina fandrobana vola ny vehivavy iray. Teo amin'ny 3 ora hariva tao #brunei
@givemecaek‎ Voalohany izao no nandrenesako fa misy fandrobana amin'ny andro mazava any Broney. o.O
Ny mpitoraka bilaogy fanta-daza ao an-toerana @ranoadidas dia namoaka tao amin'ny bilaoginy ny ahiahiny momba ity fandrobana anatina fiara fitateram-bahoaka ity izay mbola tsy nisy tany Broney hatramin'izay:
Tsy marina ireo tsaho milaza fa maty na novonoina ilay vehivavy. Noratraina tokoa izy raha ny marina ary nahavita nitsoaka niaraka tamin'ny $$ ilay mpanendaka. Araka ny loharano tao an-toerana, naka vola misimisy tamina Banky ilay mpiasavavy ary nandeha tongotra tany amin'ny faritr'i Gadong. Teo indrindra izy no voasakana teo ivelan'i Ayamku Gadong ary izay no nitrangan'ireny zava-drehetra ireny.
… Tsy mba mari-toereana ny toe-pahasalaman'ilay vehivavy niharan'ity fandrobana ity ary ilay mpandroba kosa dia mbola tsy hita foana hatramin'izao. Ny fanontaniana ankehitriny dia ny hoe aiza ho aiza ny toeran'ny fandriam-pahalemana ao Broney. Tena mampalahelo ny mahalala ity tranga iray ity noho ny haben'ny fandrobàna. Nitranga tamin'ny andro mazava be izao ity ary ampahibemaso. Tokony hanova ny fisainan'ny olona amin'ny fitondràna $$ an-tanana koa izany.
Manantena aho fa ho hitan'ny mpitandro filaminana sy ireo manam-pahefana manam-pahaizana amin'izany ilay nanao ity asa ratsy ity. Noho izany ry zalahy, mitandrema fotsiny ary mihevera tsara raha maka volabe eny amin'ny toerana be olona… Ny tranga nisy androany dia mety hiteraka ahiahy mandalo momba ny fiarovana eny amin'ireo toerana natao ho an'ny daholobe.
Toerana nisehoan'ilay asa ratsy? Avy amin'ilay pejy twitpic-n'i @purply28
Nisy tatitra teo aloha nilaza fa mety nisy mpandeha tao anatin'ilay fiara fitateram-bahoaka nahatopy maso kely ilay ‘fandrobàna’. Nalaina tao amin'ny Brunei Times:
Koa satria mbola teny am-pandehana ilay fiara fitateram-bahoaka, niteny izy fa tsy afaka nahatazana ireo olona tao anatin'ilay fiara nefa dia hitany fa samy nivoha daholo ireo varavarana roa teo aloha. Avy amin'ny faritra tandrifin'ny nitazanany, nahita olona iray ihany koa izy nitsangana “somary lavitry” ny fiara, izay nanatrika ilay tranga ihany koa.
“Nijery mivantana tany amin'ilay fiara izy. Tsy fantatro. Mety iray tamin'izy ireo izy (mpiray tsikombakomba) na koa mpijery fotsiny ihany,” hoy izy.
Saingy na talohan'ny nivoahan'ireo gazety ny ampitson'iny aza, efa nisy sahady ireo tsaho fa hoe efa voaomana iny fandrobana iny. Nivoaka ho lohateny lehibe tao anatin'ireo gazety tao an-toerana ilay sarintsarinà fandrobana. Raha ny heno, nisy mpiasa iray niezaka ny hangalatra vola avy amina mpampiasa iray tamin'ny fanaovana sarintsarim-pandrobana fiara fitateram-bahoaka. Ireto misy tsikera vitsivitsy tao amin'ny twitter:
@kisich OK… araka izany, tsy nisy mihitsy ilay fandrobana.
@ranoadidas twitpic.com/4thu4v Efa nomanina izany ilay fandrobana??
@d3x Fomba vaovao mampatahotra.twitpic.com/4thvct
Na tamin'ny voalohany aza ilay tantara dia tsy tena nisy dikany loatra. Inona no hakàn'ny olona iray BNF$20,000 sady izay tsy misy olona manaraka azy ? Tantara mampalahelo amin'ny fiezahan'ilay ‘voavely’ hamitaka ny mpampiasa azy nefa amin'ny farany dia tsy afaka ny tsy ho meloka.
Anatina angano, mety hisy ireo fiafaràna tsara, amin'ity tranga ity dia mety hangora-po ireo mpampiasa ary ka hanampy azy. Na eo aza anefa izany, tsy angano izany ity, amin'ny fiainana tena izy, tsy maintsy hiatrika ny lalàna izy.
Ity tranga ity, raha tsy jerena ny maha-tsy izy azy, dia nahatonga ahiahy teo amin'ny vahoakan'ity firenena ity fa hoe tsy atahoran'ny olona sasany intsony ny manao heloka bevava mba hahazoana tombontsoa haingana fotsiny. Mampiseho fotsiny izao fa ny vola, amin'ity tranga ity, mety hitondra ratsy fa tsy ny tsara.
6 ora izayFilipina